कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्डमा दैनिक ७ वटासम्म दुर्घटना, रोकथामका लागि ट्राफिकको अभियान | Sagarmatha TVSagarmatha TV कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्डमा दैनिक ७ वटासम्म दुर्घटना, रोकथामका लागि ट्राफिकको अभियान | Sagarmatha TV
कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्डमा दैनिक ७ वटासम्म दुर्घटना, रोकथामका लागि ट्राफिकको अभियान
शनिबार, माघ १९, २०७५
सोनी शाही । नेपालकै नमुना भनिएको काठमाण्डौको कोटेश्वर – कलंकी सडक खण्डमा दैनिक ७ वटासम्म दुर्घटना भएपछि ट्राफिक प्रहरीले सचेतना अभियान थालेको छ ।
चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको १० दशमलव ४ किलोमिटर लामो कोटेश्वर–कलंकी सडक गत सोमबार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सडकका लागि आवश्यक न्यूनतम अन्य पूर्वाधारबिनै हस्तान्तरण गरिएको यो सडक जोखिमरहित भने हुन सकेको छैन । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार यो सडकमा दैनिक जसो ७ वटासम्म दुर्घटना हँुदै आएका छन । नेपालकै नमुना भनिएको सडकमा नै दुर्घटनाको कहालिलाग्दो अवस्था आएपछि ट्राफिक प्रहरीले विहिबारदेखि साताव्यापी सचेतना कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
विभिन्न स्कूल तथा कलेजका विद्यार्थी, पैदलयात्री र आमसर्वसाधारण सहभागी सचेतना कार्यक्रममा सडकको अवस्था र बाटो काट्दा ध्यान दिनपर्नेबारे जानकारी गराइएको छ । यस अलवा सवारी चालकहरुलाई सिमित गतिमा मात्र सवारी कुदाउन सम्झाइएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
सडक विभागका अनुसार शहरी सडकमा औषतमा ४० देखि ५० किलोमिटरको गतिमा सवारीसाधन कुदाउन पाइन्छ । त्यसका लागि सडकको पुर्वाधार पनि सोही अनुशारको आवश्यक छ । तर कलंकी – कोटेश्वर सडक खण्डको डिजाइन नै गलत हुँदा समस्या आएको हो । जहाँ अधिक गतिमा सवारीसाधन कुदाईदा दुर्घटना बढ्दै गएका छन ।
नागरिक बडापत्र हात्तिको देखाउने दांत!
भ्याकुर खादा १० जना विरामी
बैशाख ११ बाट राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण
एनसेल प्रकरण : कर लिन आनाकानी गर्ने कर्मचारीकै नियत खराब!
सरकार, विज्ञापन संघ र आमसञ्चार माध्यमबीच सहयात्रा जरुरी छ
राज्यले शहीदलाई बिर्सिएको लोकतन्त्र दिवस
लोकतन्त्र दिवस : जनताले के पाए ? (भिडियो)
ट्राफिकले बनाउँदै छ जेब्राक्रस, पैदलयात्रु अनभिज्ञ
दुर्गम गाउँमा खानेपानी आयोजना, अब ‘एक घर एक धारा’
जनआन्दोलनका घाइते मुकेश १३ वर्षदेखि उस्तै
जिल्ला कमिटी घोषणा शीर्ष नेतृत्वको सहमतिमै भएको हो : माधवकुमार नेपाल
सभापति देउवाद्वारा नेता ताम्राकारलाई श्रद्धाञ्जली
आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद : फुटबलमा सशस्त्र प्रहरीले काँस्य पदक जित्यो
राष्ट्रपति भण्डारी चीन प्रस्थान, १९ गते फर्किने
एनसेलको करसम्बन्धी मुद्धाको सुनुवाई आज
राज्यलाई कर नतिर्ने एनसेलको सीम बहिष्कार गरौं : अधिवक्ता भण्डारी
डडेल्धुरामा बस दुर्घटना, ५ जनाको मृत्यु
धादिङ केन्द्रबिन्दु बनाएर ५.२ रेक्टरको भूकम्प